I-Duplex penthouse enokubukwa kolwandle, ichweba kanye nenqaba.
Dénia, Comunidad Valenciana, i-Spain
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Claudia
Inani elikhanyayo kakhulu iDulex Penthouse emgwaqeni omkhulu, enamasimu ama-3 abheke ulwandle.
Singena esitezi esikhulu lapho kukhona igumbi lokuhlala-ikhishi kanye nethala elinokubukwa kwetheku kanye ne-Montgó, igumbi elinemibhede yabantu ababili, igumbi lokugqoka kanye negumbi lokugezela, elinye igumbi lokugezela kanye negumbi elinombhede wabantu ababili kanye nezitezi enikeza ukufinyelela phansi engenhla, nge ikamelo kanye ithala esibheke Casiana Marineta Beach nomunye ithala yangasese ngaphezulu nge imibono Playa de las marinas futhi enqabeni.
I-Denia ingumasipala omangalisayo ongachitha iholide ujabulela ukudla okuphambili, amabhishi ayo anesihlabathi nama-coves lapho ungakwazi khona ukusnorkel, futhi ngaphandle kokukhohlwa imizila yayo emnandi yezintaba namathrekhi amadala wesitimela. Futhi kusukela endaweni yale penthouse, ungakwazi ukuhamba kuzo zonke lezi zindawo.
Imizuzu eyi-10 ebhishi le-marinas.
15 min ebhishi marineta casiana.
Singabantu mgwaqo kakhulu ephakathi ye Denia, endaweni kwezohwebo, ne izitolo esingaphansi 1 iminithi kude, kanye zokudlela kumnandi nemigoqo kuyiphi ukujabulela masimu abo kumnandi ngaphansi kwezihlahla ekhulwini ubudala, kusukela street pedestrianized.. Isinyathelo esisodwa ukusuka echwebeni nasezindaweni zokuphila zasebusuku. Kodwa ngaphandle kokwenza ngaphandle kokuthula nokuthula okusinikeza kona ukuba se-attic esitezi sesi-6.
Masimu zayo ezintathu ne okuphambene orientation sikwazi ukujabulela ilanga usuku lonke, futhi sibonga Ubukhulu bayo ezinkulu ungakwazi ukujabulela Sunbathing, ukwenza ezemidlalo, ukudla, abalungiselela izoso okumnandi, a paella nge izinkuni ... bonke bengaphandle.
Imizuzu emibili uhamba ngezinyawo ukusuka esitolo esikhulu, imakethe emaphakathi yaseDenia nesidlo sasemini esidumile saseValencia kanye nemakethe yemifino edumile ngoLwesihlanu.
Ikhishi lihlome ngokuphelele, kufaka phakathi umenzi wekhofi we-capsule kanye ne-toaster.
Indlu yonke ine-air conditioning kanye ne-heater.
Wonke amawindi anamashutha.
I-attic inegaraji elingaphansi, elinokufinyelela okuqondile endlini ngokusebenzisa ikheshi nezitebhisi ezingaqashwa ukuze zisetshenziswe.
Sibheke ngabomvu ukuvakasha kwakho!
4.80 · 15 okushiwo abanye
Sizokujabulela ukukusiza nganoma yini oyidingayo. Singakweluleka ngokuthi yini ongayivakashela, amabhishi, ... futhi uyatholakala ukuze uphendule noma yimiphi imibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho, njalo usenkonzweni nge-whatsapp noma i-imeyili.
Sizokujabulela ukukusiza nganoma yini oyidingayo. Singakweluleka ngokuthi yini ongayivakashela, amabhishi, ... futhi uyatholakala ukuze uphendule noma yimiphi imibuzo ngesikhathi s…
UClaudia Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VT-482939-A
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1137.
Hlola ezinye izinketho ezise- Dénia namaphethelo